प्रिन्ट संस्करण - आहा ! गुलाफ - कोपिला - कान्तिपुर समाचार
आहा ! गुलाफ
गुलाफ एकदमै सुन्दर फूल हो । हरेकजसो उत्सव र खुसीयालीमा संसारभर यो फूल प्रयोग हुन्छ । सबै किसिमका जलवायु भएको ठाउँमा फुल्न सक्ने भएकाले यसलाई विश्वव्यापी फूल (युनिभर्सल फ्लावर) पनि भनिन्छ ।
गुलाफको फूल प्राय: सबै रंगमा पाइन्छ । रंगअनुसार गुलाफको फूललाई फरक– फरक प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । रातो गुलाफ प्रेमको प्रतीक हो । पहेँलोलाई मित्रताको प्रतीक मानिन्छ । सुन्तला रंगको गुलाफ उत्साह र हौसलाको प्रतीक हो । गुलाफी रंगको चाहिँ खुसीको प्रतीक हो । गुलाफ नीलो र कालो रंगका पनि देखिन्छन् । तर तिनको प्राकृतिक रंग अर्कै हुन्छ । काला गुलाफ वास्तवमा अत्यन्तै गाढा राता गुलाफ हुन् ।
गुलाफ सयभन्दा बढी प्रजातिका हुन्छन् । गुलाफमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । यो आमाशयका लागि लाभदायक मानिन्छ । गुलाफबाट पानी, तेल र महजस्तै गुलियो खाद्यसमेत बनाउन सकिन्छ । गुलाफको फूल पफ्र्युम बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ । यसबाट आउने बास्ना एकदमै मीठो हुन्छ ।
प्राकृतिक गुलाफका ५ दल र ५ पत्र हुन्छन् । गुलाफका फूल प्राकृतिक रूपमा वर्षको एकपल्ट मात्र फुल्छन् । गुलाफका बोटमा सुन्दर फूलहरूका साथै चस्स घोच्ने काँडा पनि हुन्छन् । यी काँडा प्रकृतिले गुलाफलाई आत्म–सुरक्षाका लागि बनाइदिएका हुन् । यिनले गुलाफको बोटलाई लहराका रूपमा माथितिर उक्लिन पनि मद्दत गर्छन् ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले पहिलो पटक सन् २००२ मा गुलाफको फूललाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । यसरी पठाउनुको उद्देश्य त्यसको सुगन्धमा फरकपन आउँछ कि आउँदैन भनेर अध्ययन गर्नु थियो ।
संसारको सबैभन्दा महँगो गुलाफलाई जुलियट नाम दिइएको छ । यसको करिब ५० लाख डलर मूल्य पर्छ । यो खुर्पानी (एप्रिकोट) रंग र प्रकाशका कारण प्रभावित हुने सुगन्धका लागि प्रख्यात छ । नेदरल्यान्ड गुलाफको फूल निकासी गर्ने मुख्य मुलुक हो ।
गुलाफको फूलको सर्वाधिक प्रयोग क्रमश: भ्यालेन्टाइन डे, क्रिसमस डे र नारी दिवसमा हुन्छ । प्रेम, सौन्दर्य, साहित्य र कलामा गुलाफको व्यापक चर्चा भएको पाइन्छ । अंग्रेजी भाषा बोलिने अधिकांश मुलुकमा ‘रोज’ लाई केटीको नामका रूपमा समेत लिइन्छ ।
यति राम्रो गुलाफको फूल देखि पनि कोही कोही व्यक्ति भने डराउने गर्छन् । यसरी गुलाफको फूलदेखि डराउने रोगलाई एन्थोफोविया भनिन्छ ।